Sweatshirts → Ukwuu akwa • ọkachamara P&M eji achọ mma
Sweatshirts, n'ọnụ ụzọ ọzọ eriri afọ i Uwe, bụ ntọala nke ndị ọrụ n'ọtụtụ ọrụ. Ha bụkwa ụgbọ njem dị mma nke na-akpọsa ụlọ ọrụ, klọb ma ọ bụ ihe omume, n'ihi na ọ bụghị naanị site na itinye akara ngosi, kamakwa site na agba nke uwe, enwere ike mata ha. Sweatshirts na-eme ka mmiri na-ekpo ọkụ, na-enye ohere nnwere onwe ịmegharị karịa jaket, ma na-echebekwa uwe ndị nkeonwe.
Sweatshirts - ụdị ejiji na-aga aka na nkasi obi
Na nke anyị ụlọ ahịa ị ga-ahụ nhọrọ dị ukwuu nke sweatshirts mgbasa ozi maka ebumnuche dịgasị iche. Ngwa ndị anyị na-enye bụ nke ihe dị elu siri ike nke na-ekwe nkwa ndụ ogologo ngwaahịa.
N'ihi ihe onwunwe ha, sweatshirts na-echebe ahụ nke ọma na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche. Modelsdị dịgasị iche iche na-enye ha ohere iji ha n'oge niile n'afọ. Dabere na ihu igwe ma ọ bụ ọnọdụ ọrụ, ịnwere ike ịhọrọ ụdị nsụgharị ọkụ, udu mmiri na nke oge gị dị mkpirikpi, yanakwa ndagwurugwu mmiri na ụbịa.
Nkasi obi na arụmọrụ
Anyị maara nke ọma na ndị ahịa anyị nwere mkpa ịzụta dị iche iche ọ bụghị naanị site na ọnọdụ ọrụ, kamakwa na mmasị onwe onye. Mara nke a, anyị gbara mbọ hụ na sweatshirts enyere na asọlọ anyị nwere atụmatụ nke na-echebe megide unyi, dọọ aka na ntị ma chebe ihe ndị na-emebi ihe.
Nkasi obi, yana arụmọrụ dịkwa ezigbo mkpa. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ụdị eji enwe elekere dị mma n'úkwù na na nkwojiaka iji hụ na enwere mkpuchi ọkụ kacha elu ma chebe uwe nke onye ọrụ megide mmebi ma ọ bụ unyi. Ufodu nke swatshirts nwere ihe ndi puru iche nke na-abawanye nguzogide oru ihe nke ihe n’ime ebe ekpughere mmebi n’ihi oke ojiji (dika eg ike).
Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ekele maka ya aha mmadu ya na onwe ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ nnọchite anya na kọntaktị na ndị ọrụ ngo na ndị ahịa nwere ike. N'iso usoro a, ọ bara uru ịhọrọ usoro akara akara dị elu nke ga-eguzogide mmebi, mkpochapụ na ịsa ahụ na oke okpomọkụ. Ya mere, anyị na-akwado ya maka ịhazi onwe gị nke na-adịgide adịgide ma mara mma ihe mkpuchi kọmputa.
Ihe mkpuchi komputa na uwe
Ọ bụ n'ihi nke a na uwe e biri ebi bụ ihe a ma ama maka uwe maka ụdị ihe omume dị iche iche, nnọchite nnọchite anya, nnọkọ na ọzụzụ. Uwe dị na agba nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ klọb nwere ịhazi onwe ya nwere mmetụta dị mma na onyonyo ika ma nwekwuo ugwu ya.
Anyị na-enye sweatshirts sitere na ụlọ ọrụ dịka Reis, Leber & Hollman, Stedman, LH-Scot na Adler. Ahịa ahụ gụnyere: ajị anụ, uwe elu nwanyị, uwe elu nwanyị polypropylene, uwe elu nwanyị na-adọ aka na ntị, sweaters.
Anyị nọ n'aka gị na nhọrọ yana ịhazi ngwaahịa. Anyị nwere ogige ntụrụndụ dị elu nke na-enye anyị ọrụ dị mma na njiri dị elu maka ndị ahịa anyị. Enwere ike ịzụta ụdị ụdị zuru ezu na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị www.pm.com.pl ma ọ bụ na ụlọ ahịa anyị na Allegro "PRODUCER-BHP". Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ntuziaka nnabata anyị nlele, biko gaa taabụ firmie.
sweatshirt na-eche echichesweatshirt na embroiderysweatshirt nwere akara ngosisweatshirt with reflectorssweatshirts na-enweghị hoodblouses nchekwasweatshirts maka ndị nọ n'ọrụsweatshirts maka ọrụswatshirts maka ụlọ akwụkwọụlọ ọrụ sweatshirtsn'oge mgbụsị akwụkwọ sweatshirtssweatshirts nke oge ọkọchịmgbasa ozi sweatshirtshoodies mgbasa ozi ụgbọ mmirimgbasa ozi sweatshirts warsawmgbasa ozi hoodiesunisex sweatshirtsmmiri na-agba mmiriyiyi sweatshirtssweatshirts na akpasweatshirts na mbipụtasweatshirts oyiụmụ nwanyị sweatshirtsswatshirts ụmụ nwokesweatshirts mgbasa ozi kachasị mmauwe na ahụikeuwe maka ndị ọrụuwe mgbasa oziUwe oruegwuregwu sweatshirtssweatshirts mgbasa ozi dị ọnụ ala